Israa'iil oo habeenkii labaad duqeysay Qasa - Worldnews.com
Israa'iil oo habeenkii labaad duqeysay Qasa
Golaha wasiirada ee Israa'iil ayaa milatariga amar ku siiyay in uu sii wado in uu u awood sheegto waxa uu ku tilmaamay kuwa soo maleegaya falalka argagixisinimda ahi kaddib markii ay rabshado hor leh ka curteen marinka Qasa.
Dhismo dhawr dabaq ka kooban oo ku yaalla gudaha Qasa ayaa xalay ku burburay duqeyn ay
Israa'iil oo duqeysay qeybo ka mid ah Qasa
Israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ku qaaday marinka Qasa kaddib markii 36 gantaal oo laga soo riday dhanka Qasa ay ku dheceen gudaha Israa'iil, kuwaasi oo sida la...
Israa'iil ayaa billaawday duqeymo ay ku bartilmaameedsaneyso xerooyin ciidan oo ku yaalla marinka qaza, kaddib marki askari lagaga dilay rasaas laga soo riday xadka marinka...
Saddex qof oo Falastiiniyiin ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weerraro cirka ah oo xiriir ah oo ay Israa'iil ku ekaysay Marinka Qaza, kaddib markii...
Israel oo weerar culus ku qaadau Qasa
Ra'isal wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay in ciidamada Israel weerarkii ugu cuslaa tan iyo dagaalkii sanadkii 2014-tii ku qaadeen goobo ay mitidiintu ku...
Israa'iil oo duqeysay fariisimada Xamaas ee Qaza
Israa'iil ayaa Marinka Qaza ku qaaday weerar duqeyn oo ay ku sheegtay in ay ku burburisay qalab uu leeyahay ururka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in meesha...
Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyey laba goobood oo ku yaallo marinka Qaza kaddib marki goobahaasi laga soo riday gantaallo ku dhacay Koonfurta Israa'iil. Ciidamda...
Israa\_'iil oo duqeysay 2 goobood oo marinka Qaza ku yaalla
Diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyey laba goobood oo ku yaallo marinka Qaza kaddib marki goobahaasi laga soo riday gantaallo ku dhacay Koonfurta Israa'iil. Ciidamda Israa'iil waxay sheegeen in laba gantaal lagaga soo ganay dhinaca marinka Qaza. Mid kamid ah ay qabtaan ka kalana uu ku dhacay meel aan loogu talagalin. Ma jirto weli cid ka mid ah Kooxaha hubeysan ee ku...
Ergeyda Falastiin iyo Israa\_'iil ee gollaha Ammaanka oo hadallo kulu isdhaafsaday
Talaaddadii waxa ay Bariga Dhexe u aheyd maalin eedo kulul la isku dhaafsanayay xaaladda ka taagan Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta. Marinka Qaza qoysaska ayaa waxa ay aasanayeen tobonnaan qof oo ay Israa'iil toogasho ku dishay kaddib mudaharaadyo ka dhacay xadka. Labo qof oo kale oo shacabka Falastiin ah ayaa dhintay...
Dowladda Israa'iil ayaa dardargalineysa mashruuc ay ku kacayso lacag dhan $833 milyan oo doolar oo lagu dhisayo darbi dhulka hoosta ugu jira 40m, korna ah 6m, kaasi oo ujeedku yahay in dagaalyahanada Xamaas ee Gasa looga hor istaago in ay isticmaalaan godad dhulka hoostiisa ah. Dagaalkii 50 maalmood ee dhacay sannadkii 2014-kii kadib duulaankii Israa'iil ay ku qaaday marinka...
Qaramada Midoobey oo ka digtay xaaladda bukaannada ku jira isbitaallada Qasa
Qaramada Midoobey ayaa sheegeysa in bukaannada ku jira isbitallada ku yaal marinka Qasa ee go'doonsan ay halis geli karaan haddii Israa'iil ay qaadi weydo xayiradda ay ku soo rogtay marinka la isaga gudbo ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Qasa. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobey, ugu yaraan hal isbitaal ayaa ilaa iyo haatan ku...
Waxaa la baahiyay sawirro muujinaya Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas oo dhex lugaynaya isbitaalka gaarka loo leeyahay ee ugu wanaagsan Ramallah, isaga oo qaba dharka bukaanka iyadoo aysan cidna caawinaynin. Sawir sidoo kale ay shaaca ka qaadeen qoyska Madaxweynaha ayaa muujinaya Cabbaas oo ku kor fadhiya sariirta isbitaalka oo akhrisanaya Wargeys. Saraakiisha isbitaalka...